Ngwukpọ ndị mara mma na mbọ - echiche dị mfe, nhazi mbụ, eserese atọ, ọkpụkpụ Afọ Ọhụrụ na monograms
Monogram na mbọ - 66 foto nke nkecha imewe ngwọta maka ọ bụla uto
Mpempe akwụkwọ na mbọ bụ ụkpụrụ mbụ kachasị mma na ihe oyiyi niile. Akwukwo laconic na nwu ala - ihe magburu onwe ya na ngba ubochi ahia, ihe di nma na ndu nke minimalism - ka ha di iche iche kwa ubochi, na ihe ndi ozo di iche iche na ihe ndi ozo.
Monogram na mbọ 2018
Ihe oyiyi nke monogram nke 2018 yiri nke ọma dị iche n'ogologo na ọdịdị nke ntu ahụ, oghere dị mkpirikpi ma ọ bụghị ogologo ogologo almond na nke dị nro. Kedu ihe bụ ndị na-emepụta nkedo nka ga-amasị anyị n'ehihie nke ezumike Afọ Ọhụrụ?
Na ejiji e nwere agba ọgaranya: chocolate na nwa, na-acha anụnụ anụnụ na-acha uhie uhie, burgundy na marsala, violet na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Ihe na - ekpo ọkụ - edo edo, pastel na agba aja aja, na - acha ọcha.
A na-eji usoro ahụ eme ihe n'ụzọ dị iche, njikọ dị mma: nwa na uhie, ọcha na acha anụnụ anụnụ, onyinyo nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na "ọlaọcha", "ọlaedo" jikọtara ya na agba chacha dum, na eze - acha ọcha, ọbara ọbara na oji.
Monograms na mbọ nwere ike tinye aka na mkpịsị aka niile, ma a nabatara aka nke otu ma ọ bụ mbọ abụọ, ma na ntụgharị ụzọ na n'elu ndò. Njikọ nke mkpụrụ ego French ọ bụla na nnukwu monogram dị iche iche mara mma, ma ọ bụ ekpuchi ihe mkpuchi ahụ na ezi curls nke dum efere.
Monogram na mbọ mkpụmkpụ
Usoro a na-emekarị nke oge a bụ igwe-oyiyi, yabụ na ọ na-ewepụ ihe okike nke mbọ na monogram na-arụ ọrụ n'ogologo oge, nke na-ejikọta minimalism na ihu igwe. Nhọrọ ndị a na-adịghị ahụkebe: "ọla edo" nke dị mfe na mkpịsị aka na pink gel-lacquer, na-acha ọcha ma na-edozi ihe dị ka ntu, uwe juputara na-esere ya na eserese na ihe dị elu nke uzuzu ma ọ bụ ájá. Ogologo oge na-adịghị anya, anaghị eji ejiji abụghị ebe a na-akpọ ya na kpochapụ, nke a na-akpọ "ụdị almọnd"
Monogram na ogologo mbọ
Ihe ọ bụla ọnọdụ a na-ejighị aka ya kwuo, ejiji elongated, nke a na-etinye na monogram ahụ n'ogologo ogologo ntu ahụ, bara uru. Aka ndị nwere ụdị aka ahụ yiri nke a na-enweghị atụ, na-emeghe ọbụna otu mkpịsị aka - ugbua a na-eme ihe nkedo. Naanị otu "no" site na stylists bụ ụbụrụ na-adịghị mma, nke kachasị ogologo ntu ahụ dị 5 mm, ọdịdị nke oge a bụ oval.
Mara mma na fashionable imewe:
Mbadamba akpụkpọ ụkwụ na ogologo nkedo na-acha acha agba agba: agba aja aja, nwa na pink ma ọ bụ ụkpụrụ na-acha ọcha;
marsala, bordeaux na-acha odo odo na-egbuke egbuke, ọcha ọcha monograms na mbọ ma ọ bụ cury curls, ọzọ olu na index, n'etiti, mkpịsị aka mkpịsị aka, ma ọ bụ n'otu aka - na abụọ, na nke abụọ - na obere mkpịsị aka;
Mkpụrụ ọkụ na-acha ọcha ma ọ bụ na-acha odo odo na-acha ọcha, na-acha ọcha etu esi na obere mkpịsị aka na rhinestones na oval na ọnwa na ọtụtụ mbọ;
jaket dị ọcha na mkpuchi "okike" na ngwakọta nke usoro.
Mee aka na monograms
Echiche nke oge a na-eji aka eme ihe: monogram na-egbu egbu - ọ bụghị ihe karịrị okpukpu abụọ maka otu ntu; ihe ịchọ mma ọwụwa anyanwụ n'ogologo ogologo, nkwekorita nkwekọrịta nke otu ihe na n'akụkụ, n'elu ma ọ bụ ọnwa nke ihe nkedo. Ihe eji eme ya: usoro nke usoro na usoro di iche iche n'ime uzo ozo, nkpa nke uzo ma obu obosara uzo, ihe di mkpa na otu ma obu abuo aka na agba ocha ma obu "mkpuchi".
Njikọ mbụ: eriri na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie ma ọ bụ isi ihe na-acha ọcha, ntụpọ ojii na mbọ na uzuzu; udu mmiri na-acha uhie uhie na uzo di iche iche n'ime "ọla-edo", "ọla-ọcha" ma obu uzo di ọcha. Mkpụrụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ na-acha ọcha na-acha ọcha na ihe ịchọ mma na splashes nwere ike nke obere kristal ma ọ bụ "ọlaọcha" - echiche dị ukwuu maka a na-eji nwayọọ nwayọọ eme ihe , nke dabara adaba ọbụna n'okpuru uwe agbamakwụkwọ.
Mee aka na monograms na curls
A na-achọpụta ụdị mbọ nke mbọ aka na monograms na curls na ụda ọjọọ, karịsịa nke na-eji oji na-achagharị oji. Ejila ejiji na-acha ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha na-acha ọcha na-ejikọta na akụkọ akụkọ, nke nwere ngwakọta nke monograms, curls, geometric fuzzy lines, ntụpọ na ihe odide ihe ndozi: rhinestone, kamifubuki na obere ọla ọla.
Ịtụ ụtụ maka ndị ọkachamara na-emegharị ihe - curls na monograms na mbọ mkpịsị aka nke agba "nke okike" nke ụdị ihe odide nke nwere olu - otu jaket nke French na nke nwere mkpịsị aka na ọnwa n'otu mkpịsị aka ma ọ bụ abụọ na eserese zuru ezu na mbọ ndị fọdụrụ. Ebube mara mma na pink na nwa oji na asymmetrical lacy ụkpụrụ, na-etinyere na ọkara nke ntu.
Mee aka na monograms na rhinestones
Maka oge ntụrụndụ na nke mgbede, ị nwere ike itinye aka na monogram na rhinestones, na-acha ọcha ma na-agbanwe agbanwe, ị ga-enwe ezigbo mmapụta maka nwunye nwanyị, na ịrị elu nke a na-ejikọta monogram, ihe nkedo na ịchọrọ ihe na mkpịsị aka dị iche iche n'otu nchịkọta zuru ezu. Ejiji usoro:
Ngwakọta nke ìhè na ọchịchịrị gbara, ma na mbọ ogologo na ogologo;
Egwuregwu ahụ dị na nchara nke otu ụcha: ịbịaru ihe ịchọ mma na ụda dị oji, karịa ka isi;
Akpụcha na-acha ọcha na-acha ọcha ọcha na mfe na volumetric ihe nakawa etu esi;
ekenye obere kristal nke ọnwa ma ọ bụ ịmepụta azhura.
Volumetric monograms na mbọ
Hot kụrụ - ihe enyemaka mara mma monograms na mbọ, na-emepụta visibiliti nke atọ na-eserese. Tinyere ihe ịchọ mma na-adọrọ mmasị na-emekarị, nnukwu ihe eji eme ihe na stamping openings shiny prints. Monograms na ntu nwere ike ịbụ n'ụdị ntu oyi, mmiri mmiri na ebili mmiri, na-emegharị ihe ngosi nke ihe egwu, ọdịdị nke ọdịdị ala, na ihe osise dị iche iche: mmachi, "ududo", ihu na purl. Ihe mara mma "ọla edo" ma ọ bụ "ọlaọcha" bụ ihe kwekọrọ na isi na-acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Fatịlaịza French na monograms
Otu jaket mara mma nke French na monogram na mbọ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị nke ụdị ahụ, nhazi ihu igwe:
Nchikota atọ n'ime otu: ọnụ ọchị French, otu jaket "Hollywood" na ihe mkpuchi zuru ezu na ihe ndị na-enweghị ihe ọ bụla;
otu monogram na mbọ na-amụmụ ọnụ ọchị ma ọ bụ ngbanwe nke jaket na ụkpụrụ;
"Almond" ma ọ bụ na ọ bụ oghere a na-akpọ ya n'ogologo ogologo mbọ ahụ, site na 2 mm ruo 5 mm;
nchikota nke okpukpu abua ma ọ bụ atọ n'otu uzo aka: ọcha, uhie na acha anụnụ anụnụ, agba aja aja, pink na "gold";
Ihe ntinye ederede ma ọ bụ na-egosi ọnye ọchị;
Na-ekpuchi akwa okwute na etiti ma ọ bụ n'akụkụ nke mbọ.
Mkpụrụ akwụkwọ ọla edo na mbọ
A na - ejikarị agbacha - otu ihe ọkụkụ na - acha ọkụ ọkụ na mbọ, na - ese ya. N'agbanyeghị ihe ndabere, "ọla edo" na-agbakwụnye amara na okomoko, usoro ihe a na-emekarị - ihe nchịkọta nke mpempe akwụkwọ, mkpụrụ osisi floral na monograms sitere na obere pebbles na rhinestones. Ha adighi anya n'azu ihe osise ndi ozo na "gold" nke puru iche na ntu, ma ihe mgbagwoju anya na ihe di mfe.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpụ aka a, mgbe ahụ, ị ​​ga-egbu ya na-acha uhie uhie na ụrọ burgundy, ọ ga-abụ ihe mgbakwunye dị mma na uwe ahịa na- ezighị ezi na ihe ngosi efu. Ngwakọta dị iche iche nke nwa ojii, blue na-acha anụnụ anụnụ na ọlaedo bụ ngwọta zuru okè maka uwe mgbede na maka nwanyị azụmahịa nke na-ekpebi iwu nke uwe ejiji, na akwa na-acha ọcha na gold monograms adịghị efu na-ewere ihe kachasị mma maka ndị na-alụ ọhụrụ.
Ọkpụkpụ aka nri na monograms
Ruo otu afọ n'ahịrị, "Hollywood" na-amụmụ ọnụ ọchị na esere na mbọ, monogram na curls mbụ anaghị aga ejiji. A na-emepụta ihe ntanetị ejiji ejiji na-acha akwụkwọ ndụ, aja aja, pink, agba ntụ na agba ọcha, ebe a na-etinye ụkpụrụ ahụ n'iche dị ọcha, ọbara ọbara, "ọlaọcha" na oji. Mbipụta mbụ: oke nke ọnwa na rhinestones na obere pebbles, ntụsara ahụ na-emeghe openwork, ịbịaru nke dum nail ụkpụrụ na mkpokọta asymmetric, mejupụtara usoro dị iche iche na onyinyo nke otu ụda.
Velvet monograms na mbọ
Ihe nkedo nke oge - ajuju nke turquoise, uhie na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na monograms, nke a na-esi na ntụ. Ihe odide a na-atụgharị anya dị oke mma na nkwụsịtụ ọnụ, nkwekorita a na-ejikọta ya na ngwongwo nke ọnwa, na ihe ịchọ mma nke na-egbuke egbuke na mkpịsị aka na mbọ na pastel na-egosi ọdịiche dị iche iche nke agba ga-ezuru oke ọ bụghị nanị maka ezumike, kamakwa icho aka gị n'oge oyi .
Akara acha uhie uhie jikọtara ya na usoro ihe eji acha ọcha na oji, echiche nke oge a: nchikota dị iche iche na-acha uhie uhie na nke doro anya site na ngwa nke monograms, ihe na-emepụta ihe na ihe ndị na-adịghị ahụkebe, ma ọ bụ mkpịsị osisi. Ọ bụ ihe na-adọrọ adọrọ icho anya maka nkedo aka na onye gụrụ akwụkwọ na nhọrọ nke mkpịsị aka dị iche iche site n'itinye ntụ ntụ ma ọ bụ na-enwu gbaa. Site na nke a, ị ga-anọ na-emekarị.
Ọhụụ afọ ọhụrụ na mbọ
Ònye kpebiri na oyi na-emepụta ntu na ntu na agba ntụ, agba aja aja na creamy - nke a abụghị ememe ntụrụndụ? Ndị ọkachamara nke nkà nkedi wetara nke a na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ewu ewu, na-atụgharị ya na ụkpụrụ dị iche iche dị nro na-acha ọcha ma na-acha oji, ma jikọta ya na ndị nwere uche na-adabaghị adaba. Ọ bụ ihe eji eme ememme Afọ Ọhụrụ a na-atụghị anya ya na mmụọ nke ihe dị mma, na pearl nke na-acha na-acha anụnụ anụnụ na-acha ọcha ọcha, bụ ihe ngwọta na-adịghị mma, nke ruru eru maka ihe ọ bụla ekike.
Kedu oge ezumike maka afọ ọhụrụ na-enweghị ihe ọ bụla na-acha anụnụ anụnụ na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ? Di iche iche monogram na mbọ na nnukwu na obere nkume, ọtụtụ agba na dị iche iche na kristal dị, "gold", "ọlaọcha" na-acha ọcha ọcha, mkpuchi velvet na ndabere - ndabere kachasị mma ma na-enweta n'ezie ngwọta maka abalị kpakpando, ebe ọ bụla ị na- e meghị ya.
Ejiji ejiji si chiffon 2013
Ejiji ụgbọ mmiri na uwe 2016
Ejiji ejiji - Fall 2015
Uwe ntutu 2015
Afọ Ọhụụ Afọ Ọhụrụ 2018 - 28 foto nke echiche kachasị mma maka ịkpụcha mbọ maka Afọ Ọhụrụ
Akpụkpọ ụkwụ ejiji 2016
Akpa Mgbakọ Chanel-Winter 2016-2017
Mkpụrụ aka na mkpụrụ osisi - foto nke ngwọta dị mma maka okpomọkụ ma ọ bụghị naanị!
Ezumike Ejiji maka Full 2014
Ụdị na-enweghị atụ
Anubias - ọdịnaya n'ime akwarium
Nye nwatakịrị ahụ 1 afọ - mmepe nke mkparịta ụka, usoro nke ụbọchị, ọdịmma ya
Kedu esi eji aka aka icho akpụkpọ ụkwụ?
Cholesterol - ụkpụrụ maka ụmụ nwanyị
Akpụ aka-na-eme ihe
Kedu ka esi gbanwee gaa na nri kwesịrị ekwesị?
Ime ụlọ maka nwa agbọghọ dị afọ iri na isii
Ihe osise na mbọ aka 2016
Mgbe akụ a ugu seedlings?
Kedu ihe bara uru maka cherry plum?
Japanese quince Ezi ntụziaka
Kedu ka esi gua ndi mmadu?
Uwe ejiji ejiji n'oge mgbụsị akwụkwọ 2013
Enwụrụ ọkụ ọkụ ọkụ
Ọkara - onye bụ nke a na otu esi eme otu?
Ọhụụ Delphic - akụkọ ihe mere eme na amụma
Kedu ka ụlọ akwụkwọ ahụ si dị iche na mahadum?
Ọrụ ụlọ ụlọ Wright
Anụ ọka Avon
Di na nwunye Jessica Simpson na-akpa ya na nwanyi nanny
Kedu ka ụmụaka si egwu mmiri?